उपकार लघुवित्तको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन ? |
Home शेयर बजार उपकार लघुवित्तको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
उपकार लघुवित्तको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
काठमाडौं, १ वैशाख । उपकार लघुवित्तको आइपीओ २४ लाख ३१ हजार १७० जना लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् ।
सीडीएसका अनुसार बुधबार साँझसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड ६५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ ।
२४ लाख ३१ हजार १७० जना लगानीकर्ताले २ करोड ७५ लाख ५६ हजार २३० कित्ता लागि आवेदन दिएका छन् । यो सर्वसाधारको लागि बिक्री खुला गरिएको कित्तालाई आधार मान्दा १२४.६४ गुणा बढी आवेदन हो ।
कम्पनीले चैत २५ गतेबाट कुल २ लाख ३६ हजार २५० कित्ता आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो । यो मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८१३ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ०.५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार २८१ कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी २ लाख २१ हजार १५६ कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था थियो ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले उपकार लघुवित्तको आइपीओलाई ‘इस्यूअर रेटिङ डबल बी माइनस’ प्रदान गरेको छ ।